Ngwa Android: nyocha, ọhụụ ọhụrụ, n'efu na ndị ọzọ! | Gam akporosis
Ngwa gam akporo
Ihe gam akporo ama ọ ga-abụ ihe ọ bụla na-enweghị ya ngwa. Ngwa bụ ndị na-enye gị ohere ịbawanye arụmọrụ nke gam akporo gam akporo na njedebe na-eme nke a ihe ọ bụla ịchọrọ: ngwa ọrụ, ebe egwuregwu, ihe mmadụ chọrọ ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Na Google Play - ngwa ngwa ngwa gam akporo - anyị nwere ngwa niile masịrị yana ihe nile nwere ike ime. Agendas, egwuregwu, akụrụngwa akpaaka, netwọkụ mmekọrịta, ngwa ezumike, maka egwuregwu, wdg. Enwere ọtụtụ nhọrọ na ihe kachasị mkpa bụ inwe ike ilekwasị anya na ịchọta ihe ịchọrọ, yana izere ịwụnye ngwa ndị na-enweghị isi…. Ma nke ahụ bụ ihe anyị bụ maka! Iji nyere gị aka ụwa a nke gam akporo ngwa.
Nchịkọta nke ngwa maka gam akporo
Ngwa kachasị mma nke 2018
Budata ngwa ndị kachasị ọhụrụ nke ngwa kachasị mma
Na-achọ ngwa ahụike? Chọpụta na ngalaba a ngwa kacha mma iji meziwanye ahụike gị ma ọ bụ ndụmọdụ gbasara otu ị ga-esi nọrọ n'ụdị.
Best mma ngwa
Ngwa ime abs
Ngwa ime yoga
Ngwa ịkwụsị ị smokingụ sịga
Ntụziaka na ngwa nri
Ngwa kacha mma maka njem njem
Ngwa kacha mma maka igosipụta
N'akụkụ a ị ga-enwe ike ịma ihe niile gbasara netwọkụ mmekọrịta kacha ewu ewu n'ụwa. Etu esi ebudata ha, aghụghọ iji jiri ha nke ọma na gam akporo na ozi niile banyere ha.
Ngwa iji jiri Twitter
Ngwa iji zute ndị mmadụ
Ngwa kacha mma iji mee oku vidiyo
Kacha ọhụrụ na WhatsApp ozi ọma na usoro
Na utilities ị ga-ahụ ndị kasị mma gam akporo ngwa ga-enyere gị aka ka ndụ gị mfe. Nyochaa akwụkwọ, detuo ma ọ bụ melite arụpụtaghị gị na ngwa kachasị mma ị ga-ahụ na ngalaba a.
Ngwa azụmahịa kacha mma
Ngwa ncheta kacha mma
Ngwa iji melite arụpụtaghị ihe
Ngwa ndetu kachasị mma
Ngwa iji chịkwaa mmefu
Ngwa kacha mma iji weghachite faịlụ ehichapụ
Ngwa iji kpuchido nzuzo gị
Ngwa igbochi oku
Ngwa ka ịdekọ ihuenyo mkpanaka gị
Ngwa iji nyochaa akwụkwọ
Ngwa kacha mma ka i wepu faịlụ
Ngwa iji chọpụta rada
Ọ bụrụ na ihe ị nwere mmasị bụ ngwa gbasara pọdkastị ma ọ bụ nwee ike ịghọ DJ na-eji gam akporo ekwentị gị, ị ga-enwe ike ịchọpụta ha niile n'okpuru wee jiri ekwentị gị n'ụzọ kachasị mma.
Ngwa kacha mma maka ndị egwu
Ngwa ige redio
Ngwa ịbụ DJ na gam akporo
Ngwa iji gee pọdkastị na gam akporo
More banyere ngwa egwu na gam akporo
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ ngwa iji dezie foto gị site na mkpanaka gam akporo gị, lee ụfọdụ ngwa kacha mma iji retouch ihe onyonyo gị:
Best foto ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo
Ngwa iji hazie foto
Ngwa maka ịme foto panoramic
Ngwa iji mee memes
More banyere ngwa foto maka gam akporo
Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa nke ị nwere ike ịmụta site na ekwentị gam akporo gị, mgbe ahụ anyị hapụrụ gị nhọrọ nke ngwa ọzụzụ kacha mma na Google Play.
Ngwa kachasị mma iji mụta asụsụ French
Ngwa iji mụta ịbụ abụ
Ngwa ịmụ German
Ngwa iji mụta ịkpọ piano
More banyere ngwa dezie PDF
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịdị n’ ihe ọ bụla metụtara gburugburu Google, gụnyere ngwa ya, egbula ngalaba a. Ozi na aghụghọ niile dị na ya dị na ya.
Ngwa kacha mma maka Googlelọ Google
Ngwa kachasị mma maka smartwatch gam akporo gị
Ngwa maka gam akporo TV
10 ga-enwe gam akporo ngwa
Na gam akporo anyi huru otutu nhọrọ nke ngwa di. Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ngwa nke kwụpụtara karịa ndị ọzọ, nke anyị nwere ike ịtụle kachasị mma. Ndị a bụ ngwa 10 kachasị mma maka gam akporo taa.
Ngwa igodo ahụ amalitela nke ukwuu. Anyị anaghịzi eji ya maka ụzọ ma ọ bụ igodo ụzọ mgbe anyị na-anya ụgbọala. Anyị nwekwara ike ịhụ ọnọdụ okporo ụzọ, chọpụta ebe mmasị ma ọ bụ nwee ohere ịnweta onyinye mpaghara. A ngwa zuru oke.
Egwu Swedish gụgharia ngwa bụ otu n'ime ewu ewu na gam akporo. Ọ na-enye anyị ohere inweta nnukwu katalọgụ egwu dị na ekwentị, nke ga-enye anyị ohere ige egwu kachasị amasị anyị ebe ọ bụla anyị nọ.
Ngwa a n’enweghị mgbagha ọ bụ otu n’ime ewu ewu na gam akporo. Ekele ya anyị nwere ike izipu ozi na ndị enyi anyị na ndị ezinụlọ ma na-akpọtụrụ na oge niile. Anyị nwekwara mkparịta ụka otu, na mgbakwunye na ohere ịkpọ oku ma ọ bụ kpọọ vidiyo.
Ngwa foto a bụ otu n'ime ihe dị mkpa na gam akporo taa. Ọ bụghị naanị na ọ na-enye anyị ohere ịchekwa foto anyị niile na igwe ojii, mana ọ na-enye anyị ohere ịhazi ha ngwa ngwa n'ụdị edemede niile. Ọ na-syncs ha na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Netwọk mmekọrịta bụ otu n'ime ngwa ndị kachasị ewu ewu na gam akporo. Anyị nwere ike bulite foto na vidiyo na ya, na mgbakwunye na akụkọ ha (nke na-apụ n'anya na 24 awa). Ohere nke ịgbaso akụkọ banyere ụdị niile na ngwa ahụ, na mgbakwunye na ịnwe ike ịzụrụ ihe n'ime ya, mee ka ọ bụrụ otu n'ime ihe zuru oke.
Ọzọ na-elekọta mmadụ na netwọk na a maara na-enwe na ahịa na bụ ihe dị oké mkpa ngwa na gam akporo. Ekele ya anyị nwere ike ịkpọtụrụ ndị enyi, na mgbakwunye na ị ga-arụ ọrụ na akụkọ ụwa ma ọ bụ na-eso ndị omenkà anyị kachasị amasị ya.
The ngwa bụ isi otu na bụla gam akporo ekwentị. Anyị nwere ike ịnweta akaụntụ email anyị n'ụzọ dị mfe. Na mgbakwunye, anyị nwere ọrụ na-atọ ụtọ, dịka ịhazi usoro ozi ịntanetị. Yabụ, ịdị na-adị mgbe niile ebe ọ bụla anyị nọ.
Goodzọ dị mma iji gbanwee ọdịdị nke ekwentị gam akporo gị n'ụzọ dị mfe, yana ọrụ na nhọrọ ọhụụ, dị ka ọnọdụ gbara ọchịchịrị, nke na-enye ndị ọrụ ohere ịnwekwu aha nke sistemụ arụmọrụ oge niile.
Ihe nchọgharị dị mkpa na gam akporo, mana Google Chrome ga-ekwe omume, nke arụnyere na obodo, nke kachasị. Ọ na-enye anyị ọtụtụ ọrụ, ojiji ya dị mfe ma ọ na-enye anyị ohere ịmekọrịta ya na ụdị desktọọpụ site na akaụntụ Google.
Ngwa izi ozi ọzọ, nke rụgoro ebe na gam akporo. Ọ na-anọchi anya interface ya dị mfe, mana maka inye anyị ọtụtụ ọrụ dị iche iche, ọkachasị n'ọhịa nke nzuzo, na mkparịta ụka nzuzo ma ọ bụ ohere ị ga-ebibi ha na-akpaghị aka mgbe obere oge gasịrị.
Ngwa gam akporo ndị ọzọ
N'akụkụ a ị nwere ike ịnweta ụdị ngwa dị iche iche anyị na-enyocha kwa ụbọchị. Chọpụta nyocha anyị kachasị mma yana niile Nkuzi na usoro iji nweta ọtụtụ ihe ngwanrọ gam akporo.
por Ignacio Sala eme Oge 1 .
por Ignacio Sala eme Ụbọchị 5 .
You bụ onye na-achụ nta ero nke nwere nsogbu ịchọpụta oriri? Enwere ọtụtụ njirimara njirimara ...
por Ignacio Sala eme Ụbọchị 6 .
Dika teknụzụ nke smartphones gbanwere, na ngwa ngwa dị iche iche maka ngwaọrụ mkpanaka, anyị nwere ...
Ọ bụrụ na ị na-agụkarị banyere teknụzụ, o yikarịrị ka ị nụla okwu miri emi, okwu eji ...
Ngwa kachasị mma iji kpọọ oku vidiyo na gam akporo
Mkparịta ụka vidiyo ma ọ bụ oku vidiyo bụ otu n’ime ụdị nkwukọrịta dị iche iche taa. Ọ na-azọpụta anyị ọtụtụ ihe ...
Ndị ọzọ kachasị mma maka Fintonic na gam akporo
Fintonic bụ ihe dị mkpa maka ọtụtụ afọ mgbe ị na-ejikwa ego onwe gị ma n'ụlọ ...
Amazon ejiriwo nnukwu akụkụ nke ahịa ahụ ma a bịa n'ịzụ ahịa na Internetntanetị. Ihe omuma ...
Ebe ọ bụ na Mark Zuckerberg zụtara Instagram, netwọkụ mmekọrịta a etoola site na mmali dị otu a na Facebook ha nwere ...
Vidio ga-abụ ụbọchị taa. TikTok, Instagram na ugbua YouTube Shorts, aburula ndi ...
WhatsApp bụ ngwa ozi ngwa ngwa zuru ụwa ọnụ zuru ụwa ọnụ, nke ahụ bụ ihe kpatara ya ji bụrụkarị ...
Stickmen, nke a makwaara dị ka ọnụ ọgụgụ osisi, bụ otu n'ime ihe ọchị kachasị ọchị na egwuregwu gam akporo. Kpọmkwem maka ...
Onyinye a na-enye n'efu maka obere oge na Playlọ Ahịa Google. Melite kwa ụbọchị !!
Ihe niile iji hazie gam akporo gị n'efu !!
Mkpọchi App, otu ngwa kachasị mma iji chịkwaa nzuzo nke gam akporo gị